Finalka Cisco I-Prize! | Martech Zone
Wednesday, May 7, 2008 Arbacada, Oktoobar 29, 2014 Douglas Karr
Kooxdayda asxaabta wanaagsan, Jason, Bill, Carla iyo aniga waxaan u kaxeynay Cincinnati shalay anaga soo bandhigiddii ugu dambaysay ee I-Prize la Cisco. Xarunta Karmel waa mid aad u dhow laakiin Cisco waxay u baahneyd inay naga wareejiso si aan awood ugu siino kooxdooda Innovation-ka buuxa inay joogaan.
Iyadoo ay ka badan tahay 1100 qoraal caalami ah tartanka, waa nala xulay isla markaana ka dhigay 32-dhamaadka semi-finalka. Hadda waxaan ahayn mid ka mid ah 12-kii fikradood ee ugu dambeeyay ee lagu soo bandhigayo guddiga hortiisa ee bilaabay tartanka. Cadaadis la'aan, haah?
Waxaan ka fikiri kari waayey isku dhaf wanaagsan oo asxaab kooxeed ah oo aan kala shaqeeyo mashruucan. Arinta layaabka leh, dabcan, waa marka aad xulato koox shaqaale adag… dhamaanteen waxaan horey u leenahay shaqooyin adag. Abaal marinta I-Prize ayaa runtii ku soo kordhisay culeyskeena shaqo waana ku faraxsanahay inaan haysto saaxiibo kor u qaadi doona markaan awoodi waayo. Waxaad arkeysay culeyska ka tagaya jirkeena iyo dhoollacaddeyntu waxay soo noqonayaan ka dib markii aan dhammeynay soo-jeedinta.
Muunad fiidiyowga Telepresence waxay ku jirtaa Youtube laakiin runti ma bixiso khibrad buuxda.
Qolku waa miis qeyb ahaan oval ah oo si toos ah u wajahaya 3 shaashadood oo waaweyn oo leh kaamirooyin fiidiyow ah oo lagu dhex dhisay. Markaad kumbuyuutarkaaga kombiyuutarka ku xirto si aad u soo bandhigto, waxaa loogu talagalay xaafadda hoosteeda shaashadaha iyo sidoo kale meel fog oo shaashadda ka hooseysa si dhammaan xubnuhu u arki karaan.
Waxaan ku qabanay xaflado 3 goobood oo telepresence muuqaal ahaaneed ah kulankeena iyo waliba wicitaan kale oo si fudud u garaacay. Nidaamka ayaa si otomaatig ah u rogaya sawirka ku saleysan goobta uu ka hadlayo. Laakiin kama soo baxeyso shaashadaha oo dhan - waxay si fudud ugu rogaysaa shaashadda uu qof ka hadlayo. Waa kan sawir aad u wanaagsan oo ay tiknoolajiyaddu ka shaqeyneysay bidixda kooxda San Jose - waad arki kartaa badhkeed iyada.
Dhowr daqiiqadood gudahood adoo adeegsanaya nidaamka, waxaad runtii iloobeysaa inaad dhab ahaantii ku sugan tahay cidhifka dalka. waa waayo-aragnimo la yaab leh oo raaxo leh. Xaqiiqdii waanu la dhacnay.
Aniga oo wadnaha garaacaya iyo dad badan oo fuliyaal ah oo ka socda Cisco, waxaan isku dayay inaan qoro qof walba magacyadiisa laakiin si fudud ayaan ku lumay. Waxay ahayd wax lagu farxo in fool-ka-fool loo wajaho Marthin De Beer, in kastoo! Kooxda Cisco waxay ahaayeen kuwo iska caadi ah, sharaf leh, martiqaad iyo taageerayaal martigeliya. Cabsi kasta oo Randy, Paula iyo Simon waxay si dhakhso leh ugula faqeen kooxdii hoggaamineed ee aan horteenna ku haysannay!
Waa ku filan tahay! Sidee Soo Bandhigistu u dhacday?
Isku dayga inaad ku iibiso fikrad bilyan doolar 60 daqiiqo xaqiiqdii waa khibrad cusub. Bill wuxuu ahaa afhayeenkeena oo waa ninka ilaaliyay kulaylka kulanka. Waxaan ku dhexjiray xog badan oo warshadeed iyo khibrad aan kari karayay. Waan ogayn caqabadda ugu adag inay dhab ahaan keenayso kooxda inay aqoonsato xalka iyo fursadda. Carla waxay sawiratay sagxadeena si ay muuqaal ahaan ugu soo qabtaan buullaha xogta aan ku soo buuxinnay bog kasta.
Markaad dhahdo nidaamka “Qodobka Iibinta”, dadka waawayn waxay isla markiiba ka fikirayaan qalabka wax lagu baaro, barxad wax lagu kaydiyo, iyo awooda daabacada risiidhka iyo kaarka deynta. Taasi waa qaabkii aan ku khasbanaan lahayn inaan wareejino 30-ka daqiiqo ee hore!
We lahaa si loo helo kooxda inay aqoonsadaan in POS ay leedahay awood aad u badan oo ah inay noqoto xarunta guud ee ganacsiga iyada oo fursad loo leeyahay inay ku dhex milmaan dhammaan howlaha kale ee ganacsiga - kantaroolka agabka, keenista cuntada, shaqeynta, xisaabinta, suuqgeynta, abaalmarinta, dalbashada khadka tooska ah, kiosk amar bixinta, amar siinta wireless, warbixinta, maaraynta shirkadaha iwm.
Sababta ay dadku u arkaan POS inay tahay 'diiwaanka lacagta ee la sharraxay' ayaa ah in tani ay dhab tahay waxa ay ahayd 50-kii sano ee la soo dhaafay oo aad u yar isbeddel. Xudunta fikradeena finalka ayaa ah in POS laga dhigo HUB-ka maqaayada, oo leh shabakad aamin ah oo lagu kalsoonaan karo si ay u taageeraan wixii isgaarsiin ah.
Waxaa laga yaabaa in qaybta ugu wanaagsan ee soo bandhigidu ay ahayd, sidii aan uhadalnay, waxaan muuqaal ahaan u arki karnaa muuqaalka wejiyadooda oo isbadalay iyo nalalka shidan. Su'aalaha ayaa laga beddelay 'yaa, maxay, intee' illaa 'sidee ku saabsan, miyaad sawirtaa, maxaa diidaya'. Iyada oo la adeegsanayo warshad $ 17B ah, rajooyin ka niyad jabsan waxyaalaha hadda la bixiyo, isla markaana aan wax iibiye ah u fuulayn saxanka - warshadaha makhaayadaha ayaa horudhac u ah carqaladeynta shirkad leh ilaha Cisco
Dhamaadka kulanka, waxaan ka hadalnay macaamiil khafiif ah oo la geeyay fikradaha "Makhaayada Sanduuqa ku yaal" iyo isbahaysiyo lala gelayo macaamiisha agnostic agnostic hardware. Haa !!!! Taasi waa sawirka aan dooneynay inaan rinji mar walba. Waxaan ka helnay jawaabo aad uwanaagsan oo kooxda ah, qaar kimistari wanaagsan oo dhan, waana soo xirnay kulanka. Jason wuu cadeeyay kulanka asaga oo kooxda ku wargeliyay sababta nidaamku muhiim ugu noqon lahaa guusha uu u leeyahay maqaaxiye.
Ma aaminsani inay ka sii fiicnaan lahayd! Waxaa jira falanqeyn dheeraad ah oo ku saabsan qiime / faa iidooyin la fulin karo oo annaguna aqoonsaday khayraadka si loo helo macluumaadkaas si loo sifeeyo kiiskeena ganacsi. Dhowr kun oo doolar oo ku saabsan warbixinnada warshadaha ayaa u baahan doona in lala socdo falanqeeye wanaagsan si loola yimaado qiyaas sax ah.
Hadda waan sugeynaa! Marthin wuxuu kulanka ku soo xiray bayaan ah sida xiisaha leh ee uu u maqlay maqalka dadka kale 'waxa' Cisco 'ahayd' ama 'sameysay'. Waxaan rajeyneynaa inay iyagu iska dhex arki karaan meeshan. Tani waxay adkeyn doontaa Cisco inay tahay laf-dhabarka xogta ganacsiga, marka hore qeybta adeegga cuntada, iyo wixii ka dambeeya dhammaan warshadaha tafaariiqda.
Kooxdu waxay soo afjartay wicitaankii taleefanka waxayna sameeyeen 30 daqiiqo oo dood bixin ah. Waxaan sugeynaa ilaa iyo Juun si aan u maqalno natiijooyinka! Sax… sax… sax… sax…
Haddii Cisco uusan na dooran, waxaan horey ugala hadalnay fikradda qaar ka mid ah ganacsatada, maalgashatada malaa'igta iyo maal-galiyayaasha maalgashiga halkan gobol ahaan. Iyadoo aan lahayn shabakadda Cisco oo ay gaarto, tani waxay noqon kartaa fikrad adag oo la iibiyo. Taasi waa, illaa aynaan ka helin maalgelinta oo aynaan noqon macaamiishooda!
Tags: cisco i-abaalmarincisco iprizetelepresence
Waxaan aad u nasiib badneyn inaan awood u yeelanno inaan u soo bandhigno koox ballaaran oo ka tirsan maamulka Cisco iyo Geoffrey Moore. (Qoraha "Ka Gudubka Dhibaatada: Suuqgeynta iyo Ku Iibinta Alaabada Tiknoolajiyada Sare Macaamiisha Guud" iyo milkiilaha Kooxda Chasm Group.)
Waxay ahayd waayo-aragnimo gaar ah, waxaanan ku faraxsanahay shaqada kooxdeennu abuurtay. Mahadsanid, Carla, Doug iyo Jason !!